प्रचण्ड चीन जाँदा चिनियाँ राष्ट्रपति रुसमा, प्रचण्ड-सी भेट होला कि नहोला? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
प्रचण्ड चीन जाँदा चिनियाँ राष्ट्रपति रुसमा, प्रचण्ड-सी भेट होला कि नहोला?
नेपालखबर काठमाडौँ भदौ २९
निर्धारित समयभन्दा भारत भ्रमण १ दिन वर सारेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण दुई दिन वर सरेको छ। यसअघि १ असोजमा बेइजिङ जाने तयारीमा रहेका प्रचण्डको कार्यक्रम २ दिन वर सरेपछि उनी भोलि नै बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछन्।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको १५ सदस्यीय टोली चीन प्रस्थान गरेको भोलिपल्टै प्रचण्ड बेइजिङ प्रस्थान गर्न लागेका हुन्।
यसअघि २२ भदौमा भारत भ्रमणमा जाने योजनामा रहेका प्रचण्ड त्यो भन्दा अघिल्लै दिन २१ भदौमा नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। उनको भारत भ्रमणको कार्यतालिका पनि छोट्टिएको थियो। २२-२६ भदौमा भारत भ्रमण गर्ने भनिएकोमा २१-२४ भदौमा उनले भारत भ्रमण गरेका थिए।
असोज १ गते चीन जाने योजनामा रहेका प्रचण्ड भदौ ३० गते नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरी असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन नेपाल फर्कनेछन्।
बेइजिङमा उनले भ्रमणको विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, उनले उपराष्ट्रपति वाङ क्वीसानसँग भेटवार्ता गर्ने पक्का भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी रसिया भ्रमणमा रहेकै बेला अध्यक्ष प्रचण्ड चीन पुग्ने भएकाले राष्ट्रपति सीसँग भेट हुने नहुने टुंगो लागेको छैन।
यद्यपी, प्रचण्ड चीनमै रहेका बेला राष्ट्रपति सी रसिया भ्रमणबाट फर्कने भएकाले त्यसपछि भेटवार्ताको टुंगो लाग्ने स्रोतको दाबी छ।
सन् २०१३ मा पहिलो पटक राष्ट्रपति भएपछि सीले भेटेका प्रचण्ड नै पहिलो दक्षिण एशियाली नेता थिए।
हालसम्मको कार्यक्रम अनुसार प्रचण्ड परिवारसहित चीनको नानजिङ र एनान पुग्नेछन्। प्रचण्डको साथमा धर्मपत्नी सीता दाहाल, स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरा, छोरी गंगा दाहाल र नातिनी इशानवी भ्रमणमा सहभागी हुनेछन्।
माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको पार्टी एकतापछि हुन लागेको प्रचण्डको यो पहिलो चीन भ्रमण हो।
उता प्रवक्ता श्रेष्ठको भ्रमण टोलीमा उनीबाहेक पार्टीका केन्द्रीय तहका १४ जना नेताहरु सहभागी छन्।
समाजवादको विषयमा अध्ययन गर्न जाने भएकाले चीनमा उनको भेट मन्त्रीस्तरीय नेतासँगमात्र हुने जनाइएको छ।
प्रकाशित २९ भदौ २०७५, शुक्रबार | 2018-09-14 16:52:05
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता विभिन्न अफ्ठ्यारा झेल्दै अन्तिम अवस्थामा आएको बताएका छन्।
पार्टी एकीकरणको एक वर्षपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ७७ वटै जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको नाम टुङ्गो लगाएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीसँग चुनाव लड्न तयार छुः प्रियंका गान्धी
उत्तर प्रदेशको वाराणसीबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट लोकसभा निर्वाचनमा मैदान उत्रँदैछन्।
नेतासँग आक्रोशित युक्रेनी जनताले हास्य कलाकारलाई राष्ट्रपति चुने
युक्रेनमा हास्य कलाकार राष्ट्रपति बन्ने निश्चित भएको छ। आइतबार भएको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा हास्य कलाकार भोलोडिमर जेलेन्स्कीले पुरा मतगणणा भइसक्दा...
नेकपा स्थापना दिवस मनाउने क्रममै जिल्ला कमिटीको घोषणा गरेर एकता टुङ्ग्याउने तयारी गरिरहेका नेकपाका शीर्ष नेताहरु जिल्ला नेतृत्वको नाम टुङ्ग्याउने...